မူဆယ်မှာ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ သယ်လာသူကို မမိသေး၊...
27 พ.ค. 2563 - 15:16 น.
တရုတ်နံပါတ်ပြား တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားဟာ ၂ နိုင်ငံဝင်ထွက်ပေါက် မူဆယ်မှာ ရှိတဲ့အကောက်ခွန်ရုံးရှေ့မှာ ရပ်တန့်ထားစဉ် ဖမ်းမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဆယ်၊ကွတ်ခိုင်နဲ့ နမ့်ဖတ်ကာအကြား ပိတ်မိသူတွေ စားစရာမရှိဖြစ်၊ ပရဟိတအသင်းတွေလည်း ကူခွင့်မရ
อัลบั้มภาพ မူဆယ်မှာ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ သယ်လာသူကို မမိသေး၊ တရုတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေ